Qoor-Qoor oo Wariyeyaal ku xiray Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Labo maalmood kahor ayuu Qoor-Qoor u hanjabey Wariyeyaasha, oo uu ku eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Kooxda Al-Shabaab.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Labo Wariye ayaa xalay lagu xiray Xabsiga magaaladda Dhuusamareeb, ee xarunta gobolka Galgaduud maalin kadib markii Madaxweyne Qoor-Qoor uu ku eedeeyay Suxufiyiinta ka howlgala Galmudug inay xiriir la leeyihiin Kooxda Al-Shabaab.
C/llaahi Warsame Rooble iyo C/wali Maxamed Tooxow ayaa lagu xiray amar kasoo baxay Madaxweyne Qoor-Qoor, oo la sheegay inuu ka caroodey qoraallo ay soo dhigeen baraha bulshadda oo maamulkiisa ay ku dhaliileen wax-qabad la'aan.
Qoor-Qoor oo siyaasadda soo geliyay Farmaajo, una dhiibay xilka Madaxweynaha Galmudug ayaa ku fashilmay hogaanka maamulka isagoo mudo sanad ah jooga Xafiiska, waxaana waqtiga ugu badan ku bixiyaa u adeegidda danaha Villa Somalia.
Si uu u qariyo fashilkiisa, Qoor-Qoor ayaa billaabey olole uu ku aamusinaya warbaahinta xorta ah iyo Wariyeyaasha Galmudug kasoo warama, iyadoo arintan ay tahay mid ka baxsan dastuurka maamulkiisa iyo xeerarka caalamiga ee xoriyadda hadalka.
Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka ugu halista badan ee lagu dilo Suxufiyiinta, iyadoo dowladda Farmaajo iyo Maamul Goboleedyada lagu eedeeyay inay geysteen xad-gudub ka dhan ah bini'aadanimada iyo xuquuqda warbaahinta.